Maxay Dowladda Soomaaliya ka tiri xaaladda Falastiin? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay Dowladda Soomaaliya ka tiri xaaladda Falastiin?
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay xaaladda ka aloosan dhulka Falastiin, waxayna ku baaqday in aduunku u istaago wax ka qabashada gardarada Yahuudda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ergayda Joogtada ah ee Soomaaliya u qaabilsan Qaramada Midoobay Abuukar Cismaan Baale, ayaa taageeray dadaallada lagu doonayo in Sahnuuniyadda Israa’iil ay dulmiga ka dul qaado dalka Falastiin iyo Masjidka barakeysan ee Al-Aqsa.
Qoraal ka soo baxay xaafiiska Danjire Abuukar Cismaan Baale, ayaa lagu sheegay in xalladda Milatari ee ka jirta Qudus ay tahay mid sharciga baal-marsan, wuxuu dunida uguu baaqay in wax laga qabto gardarada Yahuudda ku hayaan shucuubta Falastiin.
Qoraalka waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay Falastiin ku taageereyso helidda xuquuqdeeda, loona dhiso dowlada madax bannaan oo Caasimaddeedu tahay magaalada Qudus.
“Xaaladda Militari ee halista ah waa mid ka dhanka ah Falastiin, waxa aan Bulshada Caalmaka usoo jeedinayaa in si degdeg ah wax looga qabto, Soomaaliya waxa ay Falastiin ku garab-taagan tahay in ay hesho xuquuqdeeda, waa in loo dhisaa Dowlad Madax bannaan oo Caasimadeedu tahay Qudus”.
Yahuudda xoogga ku joogta dhulka Falastiin ayaa ku dhawaad toban maalin wadda duqeyn iyo weerar ka dhan ah Qudus, waxayna geysteen dhibaato baaxad weyn oo dhimasho, dhaawac, barakac iyo burbur ah isku jira.
Wasiirada Arrimaha Dibadda Ururka Iskaashiga Islaamka ayaa maanta ka fariisnaya xaaladda ka taagan Falastiin, guud ahaan 57 waddan ee ururkan ku jira ayaan la rajeynaya in ay ka qeyb galaan.